I-China i-Organothiophosphate Insecticide iAzamethiphos abavelisi kunye nabathengisi | Senton
I-Organothiophosphate Insecticide Azamethiphos
Inombolo ye-CAS .: 35575-96-3
PIgama eliyimveliso: UAzamethiphos
Packaging: 25KG / Igubu, 100G/Ibhegi okanye njengemfuneko yokuGcinwa
Imveliso: 50tons / ngonyaka
Isiqinisekiso: ISO 9001: 2015, GMP.
Ikhowudi ye-HS: 29349990.21, 38089190.00
Izibuko: Shanghai, Tianjin ， Qingdao
UAzamethiphos yi-organothiophosphate Izinambuzane. YiLwezilwanyana Ukusetyenziswa kweziyobisi kwi-salmon yokufuya iintlanzi ukulawula i-parasites, iimpukane zasendlwini, iimpukane eziphazamisayo kunye nezinambuzane ezirhubuluzayo kwimisebenzi yezilwanyana: izitali, indawo yobisi, iihagu, izindlu zeenkukhu, njl. UAzamethiphosiimveliso, i-Azamethiphos 95% Tech, i-Azamethiphos 50% WP, i-Azamethiphos 10% WP kunye ne-Azamethiphos 1% GB. I-Azamethiphos ifumaneka njengombala ongwevu kumbala we-crystalline powder okanye ngamanye amaxesha njengegranules eluhlaza emthubi.
Isatifikethi se-ICAMA, iSatifikethi se-GMP zonke ziyafumaneka.
Isiqinisekiso soMgangatho ngeXabiso eliPhambili
Owona mgangatho uphezulu ngokusebenza ngokukuko njenge-Adulticides for Ulawulo lweFly.
Ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo kunye noKhuphiswano njengenkampani yokuthengisa yamanye amazwe kumzi-mveliso.
Ngelixa sisebenza le mveliso, inkampani yethu isasebenza kwezinye iimveliso, njenge iingcongconi I-Larvicide, ugqirha wezilwanyana, AbaPhakathi beKhemikhali, izinambuzane zendalo, Ukutshiza izinambuzane kwaye UHEBEI SENTON yinkampani yorhwebo yamanye amazwe eShijiazhuang, China. Amashishini amakhulu abandakanya iAgrochemicals,API& Abaphakathi kunye neekhemikhali ezisisiseko. Ukuthembela kwiqabane lethu lexesha elide kunye neqela lethu, sizimisele ukubonelela ngeyona mveliso ifanelekileyo kunye neenkonzo ezilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi eziguqukayo.
Ufuna iVenkile yeZilwanyana esebenzise iziyobisi iAzamethiphos? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke izinto ezingenambala kwiGrey Crystalline Powder ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi China Origin Factory yezilwanyana ezirhubuluzayo kwimfuyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Egqithileyo Ukusebenza okuphezulu kwezibulali zinambuzane iMeperfluthrin
Okulandelayo: Unxibelelwano olubanzi lweSpectrum yeFungicide Iprodione
I-Organophosphorus Pesticide i-Azamethiphos
I-Azamethiphos isetyenzisiwe kulimo lweentlanzi
Umgangatho wePolypeptide Antibiotic Enramycin
Ixabiso lezinambuzane iTetramethrin Permethrin
I-Enramycin enefuthe elinamandla
Amayeza e-Benzoic acid aphakathi